Dhizaini yekugadzira maturusi - Yuyao Jera Line Inokodzera Co., Ltd.
Isu Jera fiber ine yedu yega dhizaini dhizaini, kugadzira kugadzira uye mold kugadzira musangano.
Kuumba iburi rakaburitswa-kunze iro rinozadzwa nechinhu chinoyerera kana chinonamira chakadai sepurasitiki, girazi, simbi kana zvedongo mbishi zvinhu. Foroma ndiyo mubati wechinhu chakakandirwa. Semugadziri, zviri nyore kuve nemusangano wavo wekuumba, kuitira kugadzirisa uye kuunganidza simbi kuumbwa nekukurumidza uye zvobva zvabatsira mitsara yekugadzira zvakanaka.
Mukuumba musangano, isu tinowanzoita chikamu cheiyo zvigadzirwa:
-Plastic muforoma jekiseni zvigadzirwa
-Press Anoumba zvigadzirwa
-Aluminium kufa kukanda zvigadzirwa
-Zinc kufa vachikanda zvigadzirwa
-Helical waya yakaumbwa inobata
With ichi Kuumbwa workshop, Jera anokwanisa kutsvakurudza uye kutanga zvigadzirwa zvitsva kana kugadzira ari gadzirisa ano chigadzirwa siyana maererano mutengi zvinodiwa. Uye fekitori yedu inogona kukwikwidza, uye ichikwanisa kupa vatengi vedu mutengo wemakwikwi uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Chinangwa chedu kugadzira uye kupa zvigadzirwa zvakakwana uye zvakavimbika kune vatengi vedu mukuvaka kweterevhizheni network uye masimba ekuparadzira magetsi. Isu tinogadzira zvese zvinoenderana zvigadzirwa kune vedu vatengi mukuvaka kweterevhizheni network uye masimba ekuparadzira masystem. Kana iwe uine izvo zvinoenderana zvigadzirwa zvigadzirwa, ingo sununguka kutumira email kana kufona isu.